Gaming Laptop တစ်လုံးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ဝယ်ယူမလဲ?
23 Apr 2018 . 10:28 AM
Gaming Laptop ကို ဝယ်ယူဖို့ စိတ်ကူးနေတဲ့သူတွေအတွက် အခုအချိန်မှာ ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကို ပြောပြသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခုလောလောဆယ်မှာ Gaming Desktop ဆင်ဖို့လည်း စိတ်မဝင်စားပဲ Gaming Laptop နဲ့ပဲ တခါတည်းဂိမ်းဆော့ချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုရင် အခု Article က တစ်ဖက်တလမ်းကနေ အထောက်အကူပေးနိုင်မှာပါ။
Gaming Laptop လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ Nvidia Graphic Card နဲ့ Intel i7 Processor ပါတယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပြီလို့ ယူဆလိုက်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းက Intel Processor တွေနဲ့ Nvidia Graphic Card ဆိုတာထက် ပိုပြီး သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေရှိပါသေးတယ်။
အရင်ဆုံး Intel Processor တွေမှာဆိုရင် Generation – မျိုးဆက်က အရေးကြီးပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင် Intel ကနေ 8th Generation – Coffee Lake Chip တွေကို နောက်ဆုံးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Laptop Processor တွေမှာဆိုရင် U Series Processor တွေနဲ့ H Series Processor တွေဆိုပြီး ထွက်ရှိထားပြီးတော့ U Series Processor တွေကတော့ Ultra Low Voltage CPU တွေဖြစ်တဲ့အတွက် သာမန် Laptop တွေနဲ့ Ultrabook တွေမှာ အသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးတော့ H Series Processor တွေက High Performance ဖြစ်တဲ့အတွက် Gaming Laptop တွေမှာ အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Intel 8th Gen U Series Processor
Intel 8th Gen H Series Processor
အခုအချိန်မှာ Laptop ဝယ်မယ်ဆိုရင် အခု 8th Gen Processor တွေက မဖြစ်မနေကို ရွေးချယ်သင့်တဲ့ Processor တွေဖြစ်နေပါပြီ။ နောက်ဆုံး Generation ဖြစ်သွားတာကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပေမယ့် ပထမဆုံးအနေနဲ့ Intel ဟာ သူရဲ့ Laptop တွေအတွက် U Series Processor တွေကို Quad Core ၊ 8 Threads ကို အဆင့်တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သလို Gaming အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ H Series i7 Processor တွေဆိုရင်6Cores ၊ 12 Threads အထိကို အဆင့်မြှင့်တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Gaming အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Multitasking အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Multi Core Performance က ယခင် 7th Gen Processor တွေအတွက် ၂ ဆ နီးပါးကို ပိုပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လာမှာပါ။
နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Graphic Card ပါ။ လက်ရှိ Gaming Laptop အများစုမှာ Nvidia Graphic Card တွေကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် Nvidia Graphic Card တွေကိုပဲ အဓိကထားပြီးပြောသွားပါမယ်။
Gaming Laptop လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အနိမ့်ဆုံး Nvidia GTX 1050 နဲ့ GTX 1050Ti ကို ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် လက်ရှိအချိန်မှာ နောက်ဆုံးထွက် AAA Titles Game တွေကို Full HD Resolution နဲ့ ဆော့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ အချို့ဂိမ်းတွေဟာ 60fps အပြည့်ရဖို့ မသေချာပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် ကိုယ်က Online Games တွေဖြစ်တဲ့ Fortnite ၊ PUBG ၊ Dota2နဲ့ Counter Strike လိုမျိုး ဂိမ်းတွေကိုပဲ ဆော့ဖို့ ရည်ရွယ်ထားရင်တော့ GTX 1050 က လုံလောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ တကယ်လို့ တခြားထွက်သမျှ Latest Games တွေကို ဆော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ GTX 1050Ti လောက်တော့ အနိမ့်ဆုံးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ်က ဒီထက်လည်း ပိုက်ဆံပိုသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ GTX 1060 နဲ့ GTX 1070 Graphic Card တွေက ရွေးချယ်သင့်တဲ့အထဲပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုကတော့ ကိုယ်က GTX 1070 Graphic Card ပါတဲ့ Gaming Laptop ကို ဝယ်နိုင်နေတယ်ဆိုရင် Display ကိုလည်း Full HD ဆိုရင်တောင် Refresh Rate ကို 120Hz ရှိတဲ့ Gaming Laptop ကိုပဲ ရွေးချယ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် GTX 1070 Graphic Card က လက်ရှိအချိန်မှာ Full HD 60Hz Display အတွက် ဂိမ်းအားလုံးမှာ Over Power ဖြစ်နေသေးတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ Gaming Laptop ဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာ ကြည့်သင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ External keyboard တပ်မသုံးဘူးဆိုရင် Keyboard ၊ Display ရဲ့ Brightness နဲ့ Cooling System တွေက အဓိကကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆိုင်မှာပဲ မဝယ်ယူခင် ဂိမ်း ၁၅ မိနစ်လောက်ဆော့ကြည့်ပြီး Heat က Cooling Fan လိုအပ်သလားဆိုတာကိုပါ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ External Mouse ၊ Keyboard နဲ့ Hard Disk တွေပါ တပ်ပြီးအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အတွက် USB Ports တွေကလည်း အနည်းဆုံး ၃ ခုလောက်တော့ပါသင့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ RGB ပါ၊ လက်ရှိအချိန်မှာ Gaming Products တွေအတော်များများက RGB Lighting ကို သွားနေကြပြီးတော့ တကယ်လို့ ကိုယ်ကလည်း RGB Lighting တွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဝယ်ယူသင့်ပြီးတော့ Lighting က အရေးမကြီးရင်တော့ RGB မပါတဲ့ Laptop ကိုပဲ ဝယ်ပြီးတော့ အနည်းငယ်ချွေတာလို့လည်း ရပါသေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုမျိုး Intel ရဲ့ 8th Generation Processors တွေက ဒီနှစ်မှာ Gaming Laptop ဝယ်မယ်ဆိုရင် Desktop ဆင်တာနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှုပိုနည်းသွားပြီးတော့ ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေရင် အခုပဲ ဝယ်ယူသင့်နေပြီနော်။
Gaming Laptop ကို ဝယျယူဖို့ စိတျကူးနတေဲ့သူတှအေတှကျ အခုအခြိနျမှာ ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲဆိုတာကို ပွောပွသှားပေးမှာဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အခုလောလောဆယျမှာ Gaming Desktop ဆငျဖို့လညျး စိတျမဝငျစားပဲ Gaming Laptop နဲ့ပဲ တခါတညျးဂိမျးဆော့ခငျြတဲ့သူတှရှေိတယျဆိုရငျ အခု Article က တဈဖကျတလမျးကနေ အထောကျအကူပေးနိုငျမှာပါ။
Gaming Laptop လို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ Nvidia Graphic Card နဲ့ Intel i7 Processor ပါတယျဆိုရငျ အဆငျပွပွေီလို့ ယူဆလိုကျတတျကွပါတယျ။ တကယျတမျးက Intel Processor တှနေဲ့ Nvidia Graphic Card ဆိုတာထကျ ပိုပွီး သိထားသငျ့တဲ့အခကျြတှရှေိပါသေးတယျ။
အရငျဆုံး Intel Processor တှမှောဆိုရငျ Generation – မြိုးဆကျက အရေးကွီးပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျမှာဆိုရငျ Intel ကနေ 8th Generation – Coffee Lake Chip တှကေို နောကျဆုံးထုတျလုပျထားတာဖွဈပွီးတော့ Laptop Processor တှမှောဆိုရငျ U Series Processor တှနေဲ့ H Series Processor တှဆေိုပွီး ထှကျရှိထားပွီးတော့ U Series Processor တှကေတော့ Ultra Low Voltage CPU တှဖွေဈတဲ့အတှကျ သာမနျ Laptop တှနေဲ့ Ultrabook တှမှော အသုံးပွုတာဖွဈပွီးတော့ H Series Processor တှကေ High Performance ဖွဈတဲ့အတှကျ Gaming Laptop တှမှော အသုံးပွုတာပဲဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာ Laptop ဝယျမယျဆိုရငျ အခု 8th Gen Processor တှကေ မဖွဈမနကေို ရှေးခယျြသငျ့တဲ့ Processor တှဖွေဈနပေါပွီ။ နောကျဆုံး Generation ဖွဈသှားတာကလညျး တဈခုအပါအဝငျဖွဈပမေယျ့ ပထမဆုံးအနနေဲ့ Intel ဟာ သူရဲ့ Laptop တှအေတှကျ U Series Processor တှကေို Quad Core ၊ 8 Threads ကို အဆငျ့တိုးမွှငျ့ပေးခဲ့သလို Gaming အတှကျ ရညျရှယျတဲ့ H Series i7 Processor တှဆေိုရငျ6Cores ၊ 12 Threads အထိကို အဆငျ့မွှငျ့တငျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Gaming အတှကျပဲဖွဈဖွဈ၊ Multitasking အတှကျပဲဖွဈဖွဈ Multi Core Performance က ယခငျ 7th Gen Processor တှအေတှကျ ၂ ဆ နီးပါးကို ပိုပွီး စှမျးဆောငျရညျမွငျ့လာမှာပါ။
နောကျထပျတဈခုကတော့ Graphic Card ပါ။ လကျရှိ Gaming Laptop အမြားစုမှာ Nvidia Graphic Card တှကေို အသုံးပွုတဲ့အတှကျ Nvidia Graphic Card တှကေိုပဲ အဓိကထားပွီးပွောသှားပါမယျ။
Gaming Laptop လို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ အနိမျ့ဆုံး Nvidia GTX 1050 နဲ့ GTX 1050Ti ကို ရှေးခယျြရမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ လကျရှိအခြိနျမှာ နောကျဆုံးထှကျ AAA Titles Game တှကေို Full HD Resolution နဲ့ ဆော့မယျဆိုရငျတောငျမှ အခြို့ဂိမျးတှဟော 60fps အပွညျ့ရဖို့ မသခြောပါဘူး။ အဲ့ဒီအတှကျ ကိုယျက Online Games တှဖွေဈတဲ့ Fortnite ၊ PUBG ၊ Dota2နဲ့ Counter Strike လိုမြိုး ဂိမျးတှကေိုပဲ ဆော့ဖို့ ရညျရှယျထားရငျတော့ GTX 1050 က လုံလောကျမှာဖွဈပွီးတော့ တကယျလို့ တခွားထှကျသမြှ Latest Games တှကေို ဆော့ခငျြတယျဆိုရငျတော့ GTX 1050Ti လောကျတော့ အနိမျ့ဆုံးရှေးခယျြသငျ့ပါတယျ။
တကယျလို့ ကိုယျက ဒီထကျလညျး ပိုကျဆံပိုသုံးနိုငျတယျဆိုရငျတော့ GTX 1060 နဲ့ GTX 1070 Graphic Card တှကေ ရှေးခယျြသငျ့တဲ့အထဲပါပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခုကတော့ ကိုယျက GTX 1070 Graphic Card ပါတဲ့ Gaming Laptop ကို ဝယျနိုငျနတေယျဆိုရငျ Display ကိုလညျး Full HD ဆိုရငျတောငျ Refresh Rate ကို 120Hz ရှိတဲ့ Gaming Laptop ကိုပဲ ရှေးခယျြပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ GTX 1070 Graphic Card က လကျရှိအခြိနျမှာ Full HD 60Hz Display အတှကျ ဂိမျးအားလုံးမှာ Over Power ဖွဈနသေေးတာကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။
ကနျြတဲ့ Gaming Laptop ဝယျယူတဲ့အခြိနျမှာ ကွညျ့သငျ့တဲ့အခကျြတှကေတော့ External keyboard တပျမသုံးဘူးဆိုရငျ Keyboard ၊ Display ရဲ့ Brightness နဲ့ Cooling System တှကေ အဓိကကွညျ့သငျ့ပါတယျ။ ဖွဈနိုငျရငျ ဆိုငျမှာပဲ မဝယျယူခငျ ဂိမျး ၁၅ မိနဈလောကျဆော့ကွညျ့ပွီး Heat က Cooling Fan လိုအပျသလားဆိုတာကိုပါ စဈဆေးသငျ့ပါတယျ။ နောကျထပျတဈခုကတော့ External Mouse ၊ Keyboard နဲ့ Hard Disk တှပေါ တပျပွီးအသုံးပွုလာနိုငျတဲ့အတှကျ USB Ports တှကေလညျး အနညျးဆုံး ၃ ခုလောကျတော့ပါသငျ့ပါတယျ။
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ RGB ပါ၊ လကျရှိအခြိနျမှာ Gaming Products တှအေတျောမြားမြားက RGB Lighting ကို သှားနကွေပွီးတော့ တကယျလို့ ကိုယျကလညျး RGB Lighting တှကေို ကွိုကျတယျဆိုရငျ ဝယျယူသငျ့ပွီးတော့ Lighting က အရေးမကွီးရငျတော့ RGB မပါတဲ့ Laptop ကိုပဲ ဝယျပွီးတော့ အနညျးငယျခြှတောလို့လညျး ရပါသေးတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ အခုလိုမြိုး Intel ရဲ့ 8th Generation Processors တှကေ ဒီနှဈမှာ Gaming Laptop ဝယျမယျဆိုရငျ Desktop ဆငျတာနဲ့ စှမျးဆောငျရညျကှာခွားမှုပိုနညျးသှားပွီးတော့ ဝယျဖို့စဉျးစားနရေငျ အခုပဲ ဝယျယူသငျ့နပွေီနျော။